15 Bhizinesi Zvikonzero Zvekushandisa Twitter | Martech Zone
Mugovera, Mbudzi 28, 2009 Mugovera, October 25, 2014 Douglas Karr
Mabhizimusi anoramba achirwira zvikonzero zvekushandisa Twitter. Tora kopi ye Twitterville: Mabhizimusi Anogona Sei Kubudirira muNew Global Neighborhoods by Shel Israeri. Iri ibhuku rinonakidza rinonyora kuberekwa uye kukura kweTwitter sechinhu chisingaite chitsva chemabhizinesi ekutaurirana kuburikidza.
Pandaive ndichiverenga bhuku iri, Shel inotaura zvikonzero zvinoverengeka nei kambani ingade kushandisa Twitter. Ini ndinofunga mazhinji acho akakosha kunyora… pamwe nekumwe kukurukurirana… pamwe nevamwe vashoma.
Kugovera Coupons uye Zvipo - sezvo Twitter iri mvumo-yakavakirwa kutaurirana yepakati, ndiyo nzira kwayo yekugovera zvinopihwa. Shamwari yakanaka Adam Mudiki akaona izvi muresitorendi uye real estate maindasitiri - uko kusanganiswa kweMobile Alerts, Twitter, Facebook, Blogging uye syndication zvakabatsira kukura ese emabhizimusi evatengi… vachiri mumusika wakaderera!
Kutaurirana nevashandi - pachinzvimbo chekusunga maseva eemail kana kutambisa nguva yevanhu mumakamuri emusangano, Twitter chishandiso chikuru chekubatana. Muchokwadi, ndosaka zvaive yakatanga kugadzirwa naOdeo pasi pezita Twttr (ini na e takadonhedza nekunyora kushoma kweSMS!)
Kugamuchira Zvichemo zveVatengi - makambani anogara achirwira kudzivirira yavo yekuwachira mbichana kuiswa pamberi pevanhu. Izvo zvinosetsa ndezvekuti vatengi hautende mu 5-nyeredzi service futi. Iko kukurudzira kwakanyanya uye kushoropodza kwemakambani kazhinji kunouya pashure mhinduro yavo… kana kusaita basa. Nekubvuma zvichemo zvevatengi pachena, vamwe vatengi vanogona kuona kuti ikambani yakaita sei kwazvo are.
Kutsvaga kana Kutumira Jobho - Vanotora basa uye vanotsvaga vari kushandisa Twitter kutumira nezve mabasa anodikanwa kana kuvhurwa kwemabasa. Nekutsvagisa nzvimbo, unogona kunyange kutsvaga kuti uri padhuze sei kutsvaga basa uye unogona kusanganisa mamwe mazwi ekutsvaga kwako.
Ruzivo Kutsvaga uye Kugovana - Kudzoka pandakanga ndiri pasi pechiuru chevashanyi, Twitter yanga yave yakakura imwe nzira yekutsvaga injini. Google yakaziva izvi futi, kubatanidza nharaunda dzako dzepamhepo mumhedzisiro yekutsvaga. Kazhinji, mhinduro dzandinowana dzakakosha nekuti avo vanonditevera vari kushanda muindasitiri imwechete seni.
Inbound Yekushambadzira Strategic - tichiri kushanda kuCompendium, takatanga kucherechedza huwandu uye mhando yeinopinda nzira inotungamira yakauya kune yedu saiti kubva kuTwitter yaive nemikana yakawanda yekutendeuka kupfuura kuburikidza nekutsvaga. Kunyangwe injini dzekutsvaga dzakatipa huwandu hukuru hwevashanyi, isu takatanga kunyaradza vatengi kuti vapinde paTwitter uye vashandise mafidha avo nematuru akafanana Hootsuite or Twitterfeed.
Kubata Bhizinesi - mabhizinesi ane hushoma kana kusaonana neruzhinji ari kuona kuti kupa kubata kwevanhu kwakanakira bhizinesi uye kunodiwa kuchengetedza vatengi. Kana bhizinesi rako richinetseka nekupa kudyidzana kwevanhu uye riine zviwanikwa-nzara, Twitter iri svikiro rakakura. Iyo haifanire kutariswa zuva rese (kunyangwe ini ndaikuraira ... mhinduro dzinokurumidza dzinowana oohs uye aahs), asi mhinduro kubva kune isina kambani kambani nemunhu chaiye ane avatar inogara yakanaka.
Kuzvisarudzira - padivi pevanhu vanoita bhizinesi kugona kwevashandi kana varidzi vebhizinesi kuvaka zvakare yavo yemhando. Kuvaka yako pachako mhando pamhepo kunogona kutungamira kuzvinhu zvakawanda… pamwe kunyangwe kutanga yako wega agency! Iva neudyire nezve rako basa. Vanhu vakawandisa avo vaishushikana nezve izvo zvingafungwe nekambani yavo kana vakazviburitsa pamberi pevanhu vava kutsvaga mabasa nekuti iyo imwechete kambani yakavarasa.
Twitter Kutsvaga Kugadziridza neHashtags - kutsvaga paTwitter kuri kuwedzera kuwanda. Tsvaga nekushandisa ma hashtag zvinobudirira mumaTweets ako kana munzira dzako dzeopostosta.
Inobudirira Networking - Kuburitsa pamhepo pamhepo chinhu chakapfuura chekubatana pasisiteti. Ini handikwanise kukuudza mangani tarisiro yandakasangana nayo kuburikidza neTwitter. Vamwe vedu taizivana kwemwedzi tisati tanyatsobatana pasisitandi, asi zvinotungamirwa kune hukama hukuru hwebhizinesi.
Viral Kushambadzira - Twitter ndiyo yekupedzisira mukushambadzira kwehutachiona. Iyo Retweet (RT) chishandiso chakasimba zvine simba… kusundira yako meseji kubva kunetiweki kuenda kunetiweki kunetiweki mune maminetsi. Handina chokwadi chekuti kune inokurumidza hutachiona tekinoroji pamusika izvozvi.
Kusimudza mari - Shel anonyora mimwe mienzaniso mikuru yekuti makambani akashandisa zvakadii Twitter kuita mabasa erupo. Iyo bhenefiti ndeye zvese kune bhizinesi uye nerubatsiro - sezvo kubatikana kwemabhizinesi kunoziviswa zvirinani paTwitter pane zvavakango taura pawebhusaiti kumwe kunhu.
Kuronga Pamhepo - Kunze kwemakoponi uye zvinopihwa, vamwe vanhu vari kutora vatengi maodha online. Shel anonyora nezvechitoro chekofi kwaunogona kuTwitter muodha yako woenda unotora. Zvakanaka chaizvo!
Public Relations - Sezvo Twitter inoshanda nekukurumidza kunyora vanhu zana nemakumi mana, kambani yako inogona kuenda kumberi kwemunhu wese… makwikwi, vezvenhau, kudonha… nekuva nehasha PR nzira inosanganisa Twitter. Paunoita chiziviso pakutanga, vanhu vanouya kwauri. Usazvisiye kune zvechivanhu midhiya kana blogger kuti zvinhu zvinyatso… shandisa Twitter kuraira uye kunanga iko kutaurirana.
Kutaurirana Nyevero - une dambudziko nekambani yako uye unoda kutaurirana nevatengi vako kana tarisiro? Twitter inogona kuve nzira huru yekuita izvi. Pingdom yakatowedzera Twitter Alerts kune ayo masevhisi… izano rakakura sei! Kunze kwekunge ... kana Twitter yadzika havakwanise kushandisa sevhisi 😉 Nyevero inogona kuve chinhu chakakurawo… pamwe kuzivisa vatengi vako kuti chigadzirwa chadzoka mudura.
Shel akataura kuti mamwe emabhizinesi ekushandisa mumabhuku ake haakwanise kunzi akananga kumari. Kunyangwe ichi chiri chokwadi, ivo vanogona pakupedzisira kuyerwa uye kudzoka pane kudyara kuchishandiswa. Ndine chivimbo chekuti dhipatimendi rebasa revatengi riri kuteedzera vhoriyamu yekufona uye maTweets anogona kuita imwe yekuyera kuona kana Twitter ichideredza avhareji yekufona vhoriyamu sezvo mhinduro dzichiziviswa. Sezvakaita # 15… kana saiti yangu ikadzika uye yakatumirwa ... ipapo vanhu ivavo vanenge vasisakwanise kundidaidza kuti vandizivise sezvo vachiona kuti ini ndato simbisa nyaya.
Chii chandiri kushaya?
Tags: Couponszvichemo zvevatengikukanganisakutaurirana kwevashanditsvaka basainbound Marketingruzivo kutsvagaasaitakugoveranaShel IsraeriTwitterzvidzva
Nov 29, 2009 na12:36 AM
Wow, iyi yakanaka rondedzero Douglass. "Ko ndashaya chii?" inoita senge nzira chaiyo yekupedzisa iyi positi sezvo zvese zvandaigona kufunga nezvazvo zvakatobatanidzwa kumusoro uko. Ndichakuudza zvandiri kurasikirwa >> bhuku iri pasherufu yangu. Yechitatu post nhasi yataurwa saka ndiri kumupa kutenga weekend ino. Ndatenda neruzivo. —Paul
Nov 30, 2009 na12:53 PM
Unobheja, Pauro! Ibhuku rakanaka – ndafara kuti urikuriisa pachirongwa.
Nov 29, 2009 na1:49 PM
Iyo inotyisa post Douglas! Tinokutendai nekutipa zvimwe zvombo zvekutengesa Twitter uye social media marketing kune vatengi vedu.
Thanks Oscar! Zvinofadza kuti tichiri kuda zvombo, handizvo here?
Kubva kuBusiness Communication e-mail. FYI.
Nov 17, 2011 na7:51 PM
Aya mapoinzi makuru, uye akanyatsoratidza chokwadi muindasitiri yedu. Nekuti isu tiri online ongororo kambani, vanhu vanouya kwandiri kuburikidza ne Twitter ne Facebook nenyaya dzavo senguva zhinji sezvavanodaidza rutsigiro rwevatengi. Uye iwe unoziva chii, nekuti ndinonzwa ndakabatana navo kuburikidza nesocial network, ndiri kuita chokwadi chekuti chichemo chavo chigadziriswe. Takave nemhinduro yakanaka kubva pane izvi, uye mune yangu ruzivo, zvinogadzira pfungwa chaiyo yenharaunda. Chero bhizinesi risiri pa Twitter mazuva ano ririkushaikwa munzira huru!